तीन वर्षमा आइएफसीले नेपालको निजी क्षेत्रमा ९० अर्ब लगानी गर्ने
काठमाडौं । विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले नेपालको विकासको लागि ९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आइएफसीले निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्छ । नेपालका केही वाणिज्य बैंक..
एकै दिन सरकारले ५७ अर्ब बढिको ऋण तथा अनुदान स्वीकार
काठमाडौं । सरकारले एकै दिन ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकृत गरेको छ। विभिन्न दातृ निकायबाट सरकारले ४९ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबर ५७ अर्ब..
पुल सुधार र मर्मतका लागि विश्व बैकको सवा १३ अर्ब सहयोग
काठमाडौँ। पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार एवं खाद्य तथा पोषण परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैङ्कसँग १८ अर्बको सम्झौता गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग साफेरको..
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य राखेको सरकारले २४ हजार ६५६ मेगावाट जलविद्युत् आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति
काठमाडौं । सरकारले हालसम्म २४ हजार ६५६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएका ती आयोजनाको क्षमता आगामी दश वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर निर्धारण..
अब ६० दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी !
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउन तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ । आयोजनाको बाँकीे काम पहिलेभन्दा तेब्बर गतिमा भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले बताए..
स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्न चीनको साढे पाँच अर्ब अनुदान
काठमाडौं । चीन जाने सडक स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले साढे पाँच अर्ब अनुदान दिएको छ । स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक खण्ड २ लेनको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्न चीन सरकारले ३२ करोड ९० लाख युयान..
निर्माणमा लापरवाही गर्ने यी हुन कालोसूचिमा परेका दश ठेकेदार कम्पनी
काठमाडौँ । निर्माण कार्यमा चित्तबुझ्दो काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न दश निर्माण तथा मालबस्तु आयात गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणको..
विद्युत प्राधिकरणले गर्यो एकै दिन तीन आयोजनासँग पिपिए
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४० मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । प्राधिकरणले आज सुपर त्रिशूली, दूधखोला र मच्छेखोला जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता गरेको हो ।..
समुद्रमाथि बनाईएको विश्वकै लामो पुल तस्बिर सहित
एजेन्सी । समुद्रमाथि बनाइएको विश्वकै लामो पुलको मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् । हङकङ–चिनियाँ शहर जुहाई हुँदै मकाउ जोड्ने समग्रमा ५५ किलोमिटर लामो पुलको मंगलबार सिले उद्घाटन..
धनुषा । भारतको झारखण्डबाट ब्लास्ट (रेल्वे लिकमा प्रयोग हुने गिट्टी) सहितको रेल दोस्रो पटक आज जनकपुर आइपुगेको छ । रेल तथा मेट्रो विकास आयोजना साइट कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इञ्जिनीयर विनोदकुमार ओझाले..
१३ वर्षपछि विमानस्थलमा विमान अवतरण
अछाम । १३ बर्ष सम्म पूर्ण रुपमा बन्द रहेको अछामको साँफेबगर विमानस्थलमा आइतबार ९आज० नेपाल वायु सेवा निगमको विमानले सफल उडान भरेको छ । नियमित उडान सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ..
काठमाडौं । पौने सय वर्षसम्म ‘न्यारोगेज’ मा सञ्चालन भई पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको जयनगर–जनकपुर रेलसेवा दुई महिनाभित्र ब्रोडगेजमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा न्यारोगेजलाई ब्रोडगेजमा स्तरोन्नति गर्न पाँच..
काठमाडौंमै सिसामाथि हिँड्ने सुविधासहित दक्षिण एसिया कै पहिलो बन्ने भयो ‘स्काइवाक टावर’
काठमाडौं । कोरिया पुगेपछि सोल टावर नचढ्ने कमै हुन्छन् । फ्रान्सको आइफेल टावर भन्नुस वा जापानको टोकियो टावर । हरेक देशमा गर्व गर्न लायक टावर छन् । नेपालमा पनि निजी..
ऊर्जामा लगानी बढाउन विश्व बैङ्कबाट ११ अर्ब ६३ करोड ऋण लिँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि रू ११ अर्ब ६३ करोड ऋण लिने भएको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैङ्क समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी..
पच्चिस मेगावाटको सिङ्गटी जलविद्युत् आयोजनाको ‘ब्रेक थ्रु’
काठमाडौं । दोलखाको सिङ्गटी खोलामा निर्माणाधीन २५ मेगावाटको सिङ्गटी जलविद्युत् आयोजनाको शनिबार सुरुङ छेडिएको छ । आयोजनाको सुरुङ्गको यो पहिलो खण्डको हो । यसको लम्बाइ अडिटबाहेक दुई हजार ९०० मिटर..
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरानको अभियान: १२ खर्ब ४० अर्ब चन्दा उठाएर ५३०० मेगावाट जलविद्युत बनाउने
काठमाडौँ। चन्दा उठाएर साना र समान्य काम भएको त आम मानिसलाई थाहा छ । तर ठूला ठूला परियोजना चन्दा उठाएर निर्माण गरिएको इतिहास संसारमा नै एकदमै कम रहेको छ । तर..
७० लाख यात्रु क्षमता भएको भैरहवा विमानस्थल छ महीनाभित्रै सञ्चालनयोग्य
काठमाडौँ । निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ धावनमार्ग (रनवे) बाट अबको ६ महीनाभित्र विमान उड्ने भएको छ । सन् २०१९ को १६ जुलाईअघिनै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको उक्त..
७० अर्ब लागतमा बन्ने बेतन कर्णालीको इआइए शुरु, स्थानीयलाई १० र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर
काठमाडौं । ७० अर्ब लागतमा बन्ने तथा ६ लाख बढी सञ्चयकर्ताको लगानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्माण गर्न लागेको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम शुरु गरेको..
‘चिनियाँ बाहेक अरू कम्पनीले बूढीगण्डकी आयोजना मन पराएनन्’
काठमाडौँ । सरकारले करीब २८ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि सर्भेक्षण लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले त्यसमध्ये १४ हजार मेगावाटका लागि विभिन्न चरणमा..
भुकम्प पिडितलाई सरकारले दियो १ खर्ब ४८ अर्ब निजी आवास अनुदान, २ लाख ९६ हजार घर पुनर्निर्माण
काठमाडौं । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएका ५ लाख ५५ हजार ६ सय १२ निजी घरमध्ये २ लाख ९६ हजार ५ सय १४ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय..
विश्व बैंकले पुल सुधार तथा मर्मतसम्भार गर्न १३ अर्ब बढी ऋण दिने
काठमाडौं । विश्व बैंकले कम खर्चमा निर्माण हुने ४७७ भन्दाबढी पुलका लागि रु १३ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंकको प्रधान कार्यालय वासिङटन डिसीमा..
एडिबीले नगरपालिका व्यवस्थित गर्न १३ अर्ब बढी ऋण दिने
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले समुदायद्वारा व्यवस्थित नेपालका २० वटा शहरी क्षेत्रका नगरपालिकामा व्यवस्थित पानी आपूर्ति तथा सरसफाइमा पहुँच सुधार गर्न १३ अर्बभन्दा बढी ऋण स्वीकृत गरेको छ । बैंकको..
६० दिनभित्र काठमाडौंमा मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी आउने
काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकावासीले दुई महीनाको प्रतिक्षापछि मेलम्चीको पानी पिउन पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेलम्चीको खानेपानी उपत्यकावासीले लामो प्रतिक्षापछि दुई महीनाभित्र खान पाउने भएका हुन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका..
नेपाली लगानीमा नै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती निर्माण गर्ने
काठमाडौं । सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको उपयुक्त ढाँचा तय गर्दै लगानीका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्ने भएको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विगत सात वर्षसम्म आयोजनाले कुनै प्रगति नगरेको..
घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितलाई ३ लाख ऋण दिने, ३ लाख अनुदान पनि पाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियतपूर्ण..
कोटेश्वर–जडीबुटी सडकमा तिहारअघि नै बेलिब्रिज सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । सवारी चापका कारण आक्रान्त कोटेश्वर–जडीबुटीको समस्या अस्थायी रुपमा समाधान गर्न हनुमन्ते नदी तथा मनोहरा नदीको दोभानमा तिहारअघि नै बेलिब्रिज सञ्चालनमा आउने भएको छ । उक्त स्थानमा अरनिको राजमार्गको वैकल्पिक..
बुढीगण्डकीलाई भुकण्डो बनाइएको भन्दै बाबुराम भट्टराईको आपत्ति
काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई भकुण्डो बनाइएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै भट्टराईले भनेका छन्– ‘बुढीगण्डकी जस्तो दीर्घकालीन महत्वको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनालाई..
प्रतिआना २५ लाखसम्म मुआब्जा दिन बूढीगण्डकी प्रभावितको माग
गोरखा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजनाको डुबान क्षेत्रका प्रभावितले आरुघाट बजारको मुअब्जा निर्धारण गर्दा प्रतिआना रु २५ लाख सम्म दिइनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रभावितहरूको..
उर्जा क्षेत्रका लागि विश्व बैंकले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण दिने
काठमाडौं । विश्व बैंकले उर्जा क्षेत्रका लागि १० करोड अमेरीकी डलर ऋण दिने भएको छ । नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्व बैंकले पहिलो पटक ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ..
ल्हासा–केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणमा जोड
काठमाडौं । चीन भ्रमणमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओबीच मङ्गलबार राति भेटवार्ता भएको छ। भेटमा अध्यक्ष दाहालले..
Results 1098: You are at page4of 37